Vaovao - Masinina Sandblast mandeha ho azy ho an'ny marbra fanapoahana, vera, lovia vy, lovia vy
1.Ity andiam-milina ho an'ny fiaramanidina fandefasana automatique karazana sandblasting milina ity, hafainganam-pandehan'ny fifindrana misy fanovana nomerika fanovana matetika
Hafainganam-pandeha Sandb kekal, ny kalitaon'ny fanodinana dia miorina, fandidiana tsotra.
2. Ataovy amin'ny fehikibo mpampita mandritra ny fandidiana ny workpiece, ary vita ho azy ny fiasan'ny sandblasting, izay tena tsotra ary mety kokoa.
3: radian swing swing basy azo ahitsy habe.
4 Fefy basy sy famafazana basy vita amin'ny basy, azo apetraka arakaraka ny haben'ny workpiece, ary afaka manao fihodinana 720 degre, mba hahafahan'ny karazan-tsakafo rehetra miasa amin'ny sandblasting.
5.Equip miaraka amina masinina fanesorana vovoka sy fisintahana cyclone manasoka sy vovoka manokana, afaka manasaraka ny abrasive sy ny vovoka, afaka mampihena ny fanjifana abrasive, ny fandotoana ny tontolo iainana. Ny abrasives dia azo averina mandeha ho azy.
6 Ity milina andiany ity dia misy andiana basy spray 2-10, ny basy fitifirana tsirairay dia manana fifehezana misaraka, miaraka amina basy madio 2-12, afaka mampihena ny fikirakirana ilay sanganasa mifangaro amina fasika.
7 Araka ny haben'ny sanganasan'ny mpanjifa, ny endriny ary ny fivoahany ary ny famolavolana sahaza an'ity vokatra milina manokana ity, ity milina ity dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanangonana vovoka mando arakaraka ny fangatahan'ny sangan'asan'ny mpanjifa.
8.Ny masinina manontolo dia mandray ny fanaraha-maso Siemens PLC, fandidiana tsotra sy mora.
9 Fanesorana vovoka amin'ny alàlan'ny fanesorana vovoka pulsa mandeha ho azy, miaraka amin'ireo singa fanivanana marina 9-16, mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
10. Ny fampiasana akora fasika: fasika alimina (fasika corundum), karbôna silika (karbônika silika maitso, karbôna silikona mainty)
vakana vita amin'ny vera, silikom-nosy walnut, fasika resin, sombina plastika (fasiky nylon), vakana vita amin'ny seramika, vakana vy, fasika vy, vakana vy tsy misy fangarony, vakana aluminium, sns.
11.USES: mety amin'ny tile vita amin'ny keramika, marbra, vera, lovia vy, takelaka vy, takelaka aluminium, profil aluminium, akorandriaka fandraisam-bahiny, taolana solosaina finday, vato, sns.